तपाईं पाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो सपना साथी, र बालिका लागि भारत मा प्रयोग गर्न को बिना. यो लेख बताउँछ, कि तपाईं सेटिङ हुन सक्दैन लागि लगिन, ताकि तपाईं सबै साझेदारी संग भेट्न.
कुनै कुरा के लेखमा तपाईं, पढ्न र कस्तो तपाईं भिडियो हेर, रुचि र शेयर»बटन. यो छ, पाठ्यक्रम, पनि स्मार्ट, किनभने छ एक लोकप्रिय र प्रभावकारी रणनीति बनाउन सामग्री र वेबसाइटहरु को राम्रो-ज्ञात र आकर्षित गर्न फेरि र फेरि ध्यान । धेरै वेबसाइटहरु छैन पनि एक दर्ता-मात्र टिप्पणी, ब्लग, वा अन्य समीक्षा साइटहरु. बरु, त्यहाँ छ गर्न एक लिंक एक पृष्ठ, र यस मार्फत सरल फारम को धेरै चासो दल एनिमेटेड. तैपनि, धेरै चाहँदैनन्, कि मा छ साँच्चै सबै क्षेत्रमा पहुँच. हामी धेरै सक्षम हुन चाहनुहुन्छ बालिका पूरा गर्न भारत बिना पहुँच. तर, बालिका मा भारत भन्ने निश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने यो लग-मा प्रोफाइल छन्, वास्तविक प्रयोगकर्ता छ, जो किन गर्न एक लिंक एक खाता बिल्कुल आवश्यक छ. तर, त्यहाँ एक चाल द्वारा पूरा बालिका भारत मा प्रयोग गरिन्छ, लागि आवश्यकता बिना आफ्नो प्रयोग गर्न प्रोफाइल. साथै सरल कार्यक्षमता को अनुप्रयोग लिंक-अप को बैठक मा बालिका भारत किन एक कारण हो भन्दा तेज बढ्दै पूरा बालिका मा भारत को अन्त मा डेटिङ अनुप्रयोग को कान्छो पुस्ता । एक लागि, सुरक्षित हुनुपर्छ जब अनलाइन डेटिङ गोपनीयता छ, र आदर सम्मान छ । समारोह द्वारा, जब आपसी मित्र पत्ता लगाउन सक्छन्, गर्न सक्छन् मित्र हुन सक्छ कि एक सम्बन्ध मा रूपमा, बालिका भेट्न भारत मा उजागर प्रयोगकर्ता र यो तपाईं नेतृत्व गर्न सक्छन् विशाल समस्या छ । त्यो पूरा बालिका भारत मा छ पहुँच गर्न आफ्नो वर्तमान स्थान छ, केहि साँच्चै निजी छ । दोस्रो, यो असम्भव पूरा गर्न केटी मा भारत, कुनै प्रोफाइल फोटो, हुन निकालयो गर्न आफ्नो पूरा बालिका वर्तमान भारत मा. त्यसैले, यो हुन सक्छ कि सिर्फ एक फोटो छानिएको छ, जो तपाईं एक हास्यास्पद पोज देखाउँछ, तर बरु एक अनुपयुक्त फोटो चिन्न महिलाहरु । त्यसैले यो राम्रो सक्छ कि हुन हुन छौँ रूपमा चित्रण एक पूर्ण विभिन्न व्यक्ति भन्दा तपाईं साँच्चै छन् । अनुप्रयोग जस्तै, वरिपरि मा आफ्नो फोटो र सम्पर्क सूची र आफ्नो गतिविधिलाई, र,-«मलाई जानकारी देख्न सकिन्छ. निचोडमा भन्नुपर्दा: कुनै । दुर्भाग्यवश, कुनै प्रत्यक्ष तरिका छ, तर त्यहाँ छन् धेरै तरिका तपाईं उपयोग गर्न सक्छन् कि आफ्नो गोपनीयताको रक्षा गर्न जब तपाईं पूरा बालिका भारत मा राम्रो र जारी गर्न तपाईं. गर्न खोजिरहेको छ, सीमा हाम्रो गोपनीयता, को रूप मा राम्रो यो हुन्छ, हामी त साझा गर्न सक्छन् सबै गतिविधिहरु, फोटो र. तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ भने, तर सुनिश्चित गर्न शेयर संग मात्र विशिष्ट मित्र वा सेटिङ मा ठीक गर्न के, हेर गतिविधिहरु तपाईं गर्न सक्छन् लागि अन्य मा लुकाउन र बन्द, त्यसपछि यो छनौट हुनेछ. तैपनि, यो निश्चित छ गर्न सकिन्छ भनेर धेरै पूरा बालिका भारत प्रोफाइल, आफ्नो जन्मदिन, फोटो, आदि. त्यसैले, त्यहाँ छ, अर्को बाटो फाइदा लिन बालिका भारत: सरल तरिका मा दर्ता को पूरा मा बालिका भारत बिना, चिन्ता को गोपनीयता छ के गर्न बनाउन एक नयाँ संशोधित. यो उद्देश्य लागि, तपाईं गर्नुपर्छ कुनै नक्कली खाता संग काल्पनिक जन्म जानकारी र नाम बनाउन, तर एक वास्तविक प्रोफाइल चयन फोटो र कम विवरण र कुनै व्यक्तिगत जानकारी जस्तै छ । एक पटक दर्ता पूरा भएको छ, तपाईं सुरु गर्नुपर्छ भर्खरै प्रोफाइल सिर्जना, को दर्ता पूरा गर्न बालिका मा भारत, त्यसैले नयाँ प्रोफाइल लिङ्क गर्न सकिन्छ भेट्न. निस्सन्देह, तपाईं एक विस्तृत कुनै पनि समय मा, को संभावना बालिका भारत मा सुधार को लागि सुझाव. अधिक यो प्रस्ताव पूरा बालिका मा भारत को प्रयोगकर्ता प्राप्त, उच्च संभावना छ कि पूरा बालिका भारत समीक्षा लिन्छ गम्भीर र पाता तरिकामा यी प्रस्ताव छ । यो पनि हुन सक्छ नै यो छ कि भविष्यमा परिवर्तन छ, जो थाह छ । धेरै छ, यो संभावना छ कि के अद्यावधिक देखि फोटो मा देखाउने छैन भेट्न. के तपाईं लाग्छ कि यो वास्तवमा लिएका हुन, दुवै रूपमा खाता छन् सिन्क्रोनाइज, वा. यस मामला मा, दुःखको कुरा गलत छ, तथापि, तपाईं उपयोग गर्न सक्छन् नयाँ फोटो मार्फत प्रत्यक्ष सेटिङ पूरा गर्न बालिका भारत मा अपडेट. के तपाईं यो विचार, तपाईं गर्न सक्छन् कि लगइन मा भेट्न. लेख्न हामीलाई आफ्नो राय र आफ्नो अनुभव संग बैठक बालिका भारत मा तल टिप्पणी मा यो लेख । के तपाईं डेटिङ अनुप्रयोग छ र के. को पर्याप्त पूरा बालिका भारत मा, क्लिक यहाँ पूरा गर्न रोमाञ्चक विकल्प लागि. साथै, एकल पोर्टल हो । म कुनै र म चाहँदैनन् । यदि यस्तो बदमासी गर्न छ, अब अवस्था लागि एक पोर्टल, र म रहन हुनेछ तर. पछि म होइन, हुनत म, तर कुनै चासो, किनभने पहुँच गर्न मेरो.
पार मा भेट्न
जसले र -स्वामित्व प्रदान गरेको छ यसको डाटा जे भए पनि अमेरिकी कम्पनी. सम्पर्क सूची र चित्रहरु लिङ्क गर्न सकिन्छ, डाटा विश्लेषण, लग इन पटक लेखन, समय, मिलान को अनुहार मा पोस्ट तस्बिरहरू द्वारा अनुहार पत्ता लगाउने र धेरै अधिक छ, भण्डारण गरिएको छ । संग देशभक्त ऐन, जबरजस्ती गर्न सक्छन् एक कम्पनी संग एक गोपनीयता खण्ड, यो डाटा उत्प्रेरित छ, बिना प्रभावित कम्पनी बनाउन पर्छ यो सार्वजनिक । कसको हुनेछ डाटा बेचिएको हुन, तपाईं थाहा छैन. के म कोशिश छु कि छ भन्न संयोजन को पूरा मा बालिका भारत गर्दैन अधिक के संग त्यसपछि पनि ठूलो फरक छ । म मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हरेक दर, कुनै, वा गुगल (गुगल, युट्युब, खोज इन्जिन), किनभने यो प्रकट, आफ्नो जीवन पूरा गर्न अमेरिकी निगम र बुद्धि सेवाहरू । पनि खराब भनेर, छैन पनि पछि, मामला को खुलासे, अधिकांश मानिसहरू भनेर डाटा को संग्रह छ र नयाँ सुन । यसरी, हरेक मानव जातिको बनाउँछ आफूलाई कमजोर कालो बजार गर्न अघि राज्य बुद्धि र आपराधिक हैकर्स.»स्वतन्त्रता»प्रतिबन्धित छ संग, प्रत्येक पोस्ट । मा हुन्छ जो वर्ष, हुन हुन्छ रद्द आफ्नो स्वास्थ्य बीमा, यो हुन सक्छ गर्न नेतृत्व भन्ने तथ्यलाई उहाँले दुखाइ विगतमा पनि अक्सर,»फिर्ता», आदि.
मा लेख को शुरुवात, म ग्रहण देखि शीर्षक यहाँ तपाईं पूरा गर्न सक्छन्. धेरै पछि छैन अब को अन्त मा कि. अब म पढ्न को पुरा लेख को लागि केही धेरै भ्रामक, म हुनेछ मलाई, किनभने, कर्तव्य पनि पूरा गर्न बालिका, भारत मा साइन अप.
यो साँच्चै अन्तिम
मलाई चाहन्थे मा लग गर्न पूरा बालिका भारत मा, तर यो छ भने मात्र. म पनि धेरै साथीहरू, निरुत्साहित र प्रभाव को जानकारी
← मा एक सम्बन्ध, मा कदम
वैकल्पिक कैम भावनाहरु ≥ फ्री →